Pakistan: Ciidamada Dowlada oo dilay hogaamiye kooxeed la baadi-goobayey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Pakistan: Ciidamada Dowlada oo dilay hogaamiye kooxeed la baadi-goobayey
Pakistan: Ciidamada Dowlada oo dilay hogaamiye kooxeed la baadi-goobayey
May 18, 2018 - By: HORSEED STAFF
Ciidamada ayaa sheegay in hawlgal dhacay Khamiistii shalay lagu dilay Salman Badeni, oo ahaa hogaamiyaha kooxda Lashkar-e-Jhangvi ee gobalka Balochistan ee koonfur-galbeed wadankaasi.
Hawlgalkan militariga oo ka dhacay caasimada gobalkaasi ee Quetta ayaa waxaa sidoo kale lagu dilay mid kamid ah saraakiisha sirdoonka Militariga iyadoo ay dhaawacyo soo gaareen ugu yaraan 4 askari oo kale oo ka qeyb qaatay hawlgalkaasi.
Hogaamiyaha la dilay iyo kooxdiisa ayaa lagu eedeeyey inay ka danbeeyeen weeraro badan oo lala beegsaday Qowmiyada Hazara ee shiicada dalkaasi oo boqolaal kamid ah lagu dilay weeraro si gaar ah loola beegsaday.
Dhinaca kale afhayeen u hadlay kooxda uu ninkan hogaamin jiray ee Lashkar ayaa sheegay in hogaamiyahan Salman Badeni uu dhawaan ka baxay kooxdooda isagoo ku biiray kooxda Daacish / ISIS.
Saacado kadib hawlgalka lagu dilay hogaamiyahan ayey koox ka tirsan taageerayaashiisa oo gaaraya 5 isku dayeen inay weerar ismiidaamin ah ku qaadaan saldhiga militari ee magaalada Quetta, shantaasi ayaa dhamaantood la dilay sida lagu sheegay warsaxaafadeeda kasoo baxay ciidamada.